China Distal Fibular Locking Plate orinasa sy mpanamboatra | Shuangyang
Takelaka fanidiana fibre lavitra
Ny takelaka fanidiana trauma eo anoloana eo anoloana dia misy endrika anatomika sy mombamomba azy, na ny distal na ny amin'ny tohatra fibre.
1. Vita amin'ny teknolojia fanodinana titanium sy mandroso;
5. Combi- hole dia mety misafidy visy fanidiana sy visy korteks;
Ny lozam-pifamoivoizana mihidy eo anoloana eo anoloana dia nanondro ny vaky, ny osteotomies ary ny nonunions ny faritra metaphyseal sy diaphyseal an'ny fibal distal, indrindra amin'ny taolana osteopenic.
Nampiasaina tamin'ny screw3.0 hidin-trano, screw3.0 visy kortônika, nifanaraka tamin'ny setran'ny fitaovana fandidiana 3.0 andiana.
Havia 4 havia
4 Lavaka havanana
Havia 6 havia
6 Lavaka havanana
Havia 8 havia
8 Lavaka havanana
Distal Posterior Fidular Fibular Locking Plate-II Type
Ny fametahana takelaka takelaka afara any aoriana dia misy endrika anatomika sy mombamomba azy, na ny distal na ny amin'ny tohatra fibre.
1. Vokatry ny teknolojia fanodinana titanium sy mandroso;
Ny takelaka fanidiana orthopaodika aorin-damosina any aoriana dia nanondro ny fivakisana, ny osteotomies ary ny nonunion an'ny faritra metaphyseal sy diaphyseal ao amin'ny fibla distal, indrindra amin'ny taolana osteopenic.
Ampiasaina amin'ny screw3.0 hidin-trano, screw3.0 kortika, mifanentana amina fitaovam-pitsaboana 3.0 sries.
Ny takelaka fanidiana trauma avy eo anelanelan'ny tendrony dia misy endrika anatomika sy mombamomba azy, na ny distal na ny amin'ny tohatra fibre.
1. Anodized ambonin'ny;
2. Famolavolana endrika anatomika;
3. Vita amin'ny teknolojia fanodinana titanium sy mandroso;
4. Ny famolavolana endrika ambany dia manampy amin'ny fampihenana ny fahasosorana amin'ny tavy malemy;
Ny takelaka fanidiana fibra eo anelanelan'ny tendrony dia nanondro ny fivakisana, ny osteotomies ary ny nonunions an'ny faritra metaphyseal sy diaphyseal an'ny fibal distal, indrindra amin'ny taolana osteopenic.
Nampiasaina tamin'ny screw3.0 hidin-trano, screw3.0 kortika, mifanentana amina setela fitaovana orthopedic 3.0 andiany.
Ny takelaka fanidiana dia niha-nandroso fa indrindra indrindra tato ho ato dia nanjary ampahany amin'ny arsenalin'ny mpandidy orthopedic sy traumatology ankehitriny ny teknikan'ny osteosynthesis. Na izany aza, ny foto-kevitry ny takelaka fanidiana mihitsy dia matetika no tsy takatra ary vokatr'izany dia diso ny fitsarana azy. Raha fohifohy, ny takelaka fanidiana dia mitondra tena toy ny fixer ivelany fa tsy misy fatiantoka ny rafitra ivelany dia tsy amin'ny famindrana ireo sela malemy ihany, fa amin'ny lafiny mekanika sy ny risika amin'ny sepsis ihany koa. Raha ny marina dia "fixator anatiny" kokoa io
Ny takelaka taolana titanium misy karazany sy voafaritra isan-karazany dia noforonina araky ny toerana fampiasana sy ny endrika anatomika ny taolana ary ny fandinihana ny haben'ny hery, mba hanamorana ny fisafidianana sy ny fampiasana ireo mpandidy orthopedics. Ny takelaka titanium dia vita amin'ny akora titanium natolotry ny AO, izay mety amin'ny fametahana anaty ny cranial-maxillofacial, clavicle, rantsam-batana sy valahana.
Ny takelaka taolana titanium (takelaka fanidiana taolana) dia natao ho mahitsy, takelaka taom-biby anatomika ary ireo dia samy hafa ny hateviny sy ny sakany arakaraka ny toerana fampidirana azy.
Ny takelaka taolana titanium (takelaka mihidy) dia natao hampiasaina amin'ny fanarenana sy ny fanamafisana ny clavicle, ny rantsam-batana ary ny taolana tsy tapaka na ny kileman-taolana, mba hampiroboroboana ny fanasitranana ny vaky. Amin'ny dingan'ny fampiasana, ny takelaka misy ny taolana mihidy dia ampiasaina miaraka amin'ny visy fanidiana mba hananganana tohana mafy sy mafy orina ao anaty. Ny vokatra dia omena amin'ny fonosana tsy misy volo ary natao hampiasaina tokana.
Amin'ny taolana osteopenika na vaky misy sombin-javatra maro, ny fividianana taolana azo antoka amin'ny visy mahazatra dia mety hanimba. Ny visy fanidiana dia tsy miankina amin'ny tsindry taolana / lovia mba hanoherana ny enta-mavesatry ny marary fa miasa mitovy amin'ny takelaka kely misy zoro kely. Ao amin'ny taolana osteopenika na vaky multifragmentary, ny fahaizana manidy visy ho fanamboarana zoro raikitra dia ilaina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana visy fanidiana ao anaty takelaka taolana dia amboarina ny fananganana zoro raikitra.
Nofintina fa misy valiny miasa mahafa-po amin'ny fametahana ny valan'ny humerus proximal miaraka amin'ny takelaka fanidiana. Mandritra ny fampiasana ny takelaka takelaka amin'ny vaky dia ny toerana lovia no zava-dehibe indrindra. Noho ny fahamarinan-toeran'ny angular, ny takelaka fanidiana no tombo-kase manararaotra raha sendra tapaka ny vatan'ny humeral.
Teo aloha: Takelaka fanidiana tubular iray ampahatelony
Manaraka: Takelaka fanidiana kalcanealy
6.5 Sokiro fanidiana azo zakaina
Plateau fanidiana Tibia mediale maro-axial ...
Plateau fanidiana hidin-kazo isan-jato Tibia ...
Takelaka fanidiana volar-kely sy lehibe